HARIIROO DHAANGA’OOTA OMN (USA) FI TVO (OROMIYAA) – Kichuu
HomeAfaan OromooHARIIROO DHAANGA’OOTA OMN (USA) FI TVO (OROMIYAA)
by Beekan Erena on June 24, 2017
Dhimma Dr. Birhaanuu Kanaan walqabsiisee gaazexeessitoota yeroo sana OMN keessa tajaajilaa turan Jawar irratti guungumaa turan. Guungummiin kunis maaliif aanga’aa OPDO kana as keessa galchuudhaan akka nufaana dalagu goota? Kan jedhu ture. Deebiin kennames, nuti nama barate haata’u malee dhimmi akkanaa hinqabnu ykn ilaalchi siyaasaa namni kun hordofu irraa dhimma hinqabnu jechuun gartummaasaa OPDO qabu calaqqisiise. Dr. Biraanuun Marsariitiifi ‘Youtube’ OMN kallattiin Austraaliyaa taa’ee timeviwer dhaan to’ataa ture. Wantoota iccita takinooloojiin walqabatan akka waliigalaatti iccitiin OMN Dr. Birhaanuu Olaanaa harka ture. Ammallee hariiroo guddaa OMN faana qaba. Dr. Biraanuun gara waggaa tokkoof erga ogummaasaan OMN gargaaree, ittis hamma tokko erga gargaarameen booda ofumasaan hojicha dhaabe. Booda keessa barnootasaa xumureetu guyyaa Ayyaana Diyaasfooraa Mootummaan Wayyaanee biyya keessaa qopheessitetti namoota Oromoota biyya keessatti lafa argachuuf waadaan isaaniif galameefi Invarstimantiitiif kaadhimaman hunda oogganuun fudhatee gale. Ofiisaatis amanamummaa gonfate. Maatiinsaas asuma biyya alaa kana jiru. Gaafa barbaade nidhufa; gaafa barbaadee Oromiyaa keessa dalaga. Sirna sanaaf lafee dugdaati. Oogganaa OMN faanas hiriyaa addaati. Waan barbaadan alaaf keessatti walumaan qindeessu. Durumaatu Dr. Birhaanuun sirna sanaan biyya alaatti waan ergameef, waan OMN dalagus ta’e waan biyya keessaa dalagamu hunduu mootummaa Wayyaanee biratti iccitaa miti. Yeroo biyya seenanis waa’ee diyaasfooraa qabatee biyya galeetiif gaazexeessaan Dr. Biraanuuf gaaffiifi deebii taasisuu barbaannaan akka dide bira gahameera. Kunis OMN faana utuu dalaguu waan biyya seeneef yeroof mataa dhokfachuuf ture. Icciiti kunis otuu Dr.Biraanuun galma walgahii sana keessaa hin ba’in nu Oduunsaa Diyaasforaa gahe. Har’a garuu xiqqoo barri gaafa dabartu qophii anaa dhufuurratti as ba’ee dubbataa jira (Hidhaa itti aanu kana ilaali
Yeroo tokko Prof. Asfaw Beyyenee dabalatee miseensoti Boirdii OMN rakkoo mana OMN keessa jiru xiinxaluuf gaaffilee raabsan. Gaazexeessitoota hedduus dhuunfaa dhuunfaan dubbisan. Qorannoo sana kan oogganaa turan ammoo maatii haadha manaa Jawar Arfaasee turan. Kunis akkuma Dr. Hamzaan dhaabbaticha gadi dhiisanii ba’aniin ture. Qorannicha sana keessattis gaaffileen ‘namni haga har’aatti bakka isaa malee iddoo isaaf hinmalle taa’aa jiru jira jettanii yaaddan jiraa?” Kan jedhu ture. Deebiiwwan gaazxessitoonni manichaa nama tokkorraan kan hafe deebisan hundi ‘Jawar Mohaammed’ kan jedhu ture. Yeroo sana Jawar karaa Dr. Biraanuu hojimmaata OMN hunda ooggana malee aangoo tokkoyyuu hin qabu ture. Kanumaan walqabatee maallaqni dhaabbatichaa lafa sadii akka jiru beektuu laataa? (Yeroo biraan itti deebi’a). Yeroo ammaa kana Najat maqaaf bakka buutus maallaqni namoota miindaan kaffalamuuf ala caalaa itti kennamuu hindanda’u. Maaliif?…itti deebina. Maallaqni OMN f galu yeroo baayyee calla (Cash) dha. Kun maaliifi? Eenyutu kaashii kana qindeessee namoota kana harkaa fuudha? Waan gargaarsa tolaa (welfare) walqabatee jiru iccinni danuun ala kana jira. (Sanas booda itti deebina). Waan calla (cash) ta’eef ammoo hamma kennamuufi ba’u beekuun to’annaan ala. Yeroo ammaa kanatti namoonni keessumattuu Xiinxalummaan OMN keessatti akka amanamootaatti bobba’an Jawar jala adeemu? Kan jedhu iccita qaba.
Isa kanas barruu biraanan itti deebi’a. Yeroo Abbaan Duulaa Gammadaa gara Minesota’ dhufetti iccitiiwwan ta’an maal maalfaadha? Suuraawwan guutummaatti argamaniifi viidiyoo argine sana boroo dubbii akkam akkamiifaatu ture? … Obbo henok gabbisaa ilaaltuu seeraa OMN kan ture akkamiin ari’amee ammoo itti deebifame? Yoom? Maaliif? Kanas gadi fageenyaan yeroo biraan itti deebi’a. OLC’n adeemsa keessa maaliif as bahe? Kaayyoofi mul’anni inni qabatee ka’e hariiroo inni biyya alaafi keessatti qabu maali? Kanas ittan deebi’a. Miidiayan aadaafi afaan keenyaa nubarsiisiisaafi guddisaa ture OBS n biyya keessa jirullee akkamiin baname? Hariiroo inni OMN faana qabaataa turewoo? Gaazxessitoonni TVO 17n akkamittiin ariyamani? Eenyutu harka keessaa qaba? Kan jedhuufi kan kana fakkaataniif barreeffama dheeraan boodarra qaba. Gaazxeessitoonni sun battaluma ariyatamanitti akkamitti hojii argatani? Waggaa tokkoon booda akkamitti hojii dhabeeyyii ta’an? …kun hundi iccita fagoo qabu. Jawar Mohammed yeroo gabaabaa keessatti akkamitti garaa namootaa keessa gale? Dubbii uummanni barbaadu filatee as ba’uun miidiyaarratti dubbachuun battaluma tokkummaa Habashootaa keessaa waggaa sadan dura as deebi’ee asitti akkamiin beekamtiinsaa dafee saffise? Kun hundumti barruu dheeraa nabrbaada.
The 30 best places to visit around the world that are worth
OMN: Marii maanguddoota Australia, Melbourne , Miidiyaa Hawaasaa (Social Media)